Nchọpụta ihe ọmụmụ banyere ihe ọkụkụ ndị na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ya - China Plant physiological detection Factory
Nyocha osisi na-agbapụta mita FK-JL01
Usoro nke nyocha nke ikpo ọkụ nwere ike tụọ njupụta nke ntanye nke osisi oge, nke nwere ike ịga n'ihu na-elele mmiri nke osisi ruo ogologo oge, nke na-enye aka ịmụ iwu nke mgbanwe mmiri n'etiti osisi na ikuku, ma were nke a dị ka usoro nyocha iji nyochaa mmetụta nke usoro ohia na oke ohia na mgbanwe gburugburu ebe obibi ruo ogologo oge. Ọ bụ nnukwu ihe atụ dị mkpa yana uru itinye n'ọrụ maka igbochi ọhịa, njikwa oke ọhịa na njikwa oke ọhịa.
High nkenke osisi respiration mita FK-GH10
A na-eji ya eme ihe maka mkpebi na nyocha nke ike mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'okpuru ọnọdụ nkịtị, nchekwa oyi, nchekwa ikuku na-achịkwa, nnukwu ụlọ ahịa friza na ọnọdụ nchekwa ndị ọzọ. Njirimara nke akụrụngwa bụ na ọ nwere ike ịhọrọ olu dị iche iche nke iku ume ume dịka mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, nke na-eme ka oge na mkpebi siri ike; ọ nwere ike n'otu oge igosipụta CO2 ịta ahụhụ, O2 ịta ahụhụ, ọnọdụ okpomọkụ na iru mmiri nke ụlọ iku ume. Ngwaọrụ nwere njirimara nke ọtụtụ ọrụ, nkenke dị elu, ngwa ngwa, ịrụ ọrụ nke ọma ma dị mma. Ọ dị mma maka mkpebi iku ume nke ụdị mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri niile na nri, ịkọ ahịhịa, mkpụrụ osisi, akwụkwọ nri, azụmahịa mba ọzọ na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ na ụlọ ọrụ nyocha.